किन बढी काम गर्छन् सोनु दक्षिण भारतीय फिल्ममा ? | Nepal Ghatana
किन बढी काम गर्छन् सोनु दक्षिण भारतीय फिल्ममा ?
प्रकाशित : १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार १२:१९
बलिउड अभिनेता सोनु सुद बलिउडमा चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन । उनले आफ्नो करियरको सुरुवात सन् १९९९ मा ‘कालाझगर’ र ‘नेन्जिनिले’ जस्ता तमिल फिल्मबाट गरे । दक्षिण भारतीय फिल्ममा लामो समय बिताएपछि उनले हिन्दी फिल्ममा पाइला चाले । उनले हिन्दी फिल्ममा भने ‘शहीद-ए-आजम’बाट अभिनय सुरु गरेका थिए ।
यद्यपि, सोनु दक्षिण भारतीय फिल्ममा निकै सक्रिय छन् । हालैमात्र सोनुले दक्षिण भारतीय फिल्ममा किन बढी समय दिन्छन् भन्ने कुराको खुलासा गरेका छन् । उनले एक अन्तर्वार्तामा दक्षिण भारतीय फिल्मप्रतिको मोहका बारेमा कुराकानी गरेका छन् ।
‘म स्क्रिप्टलाई लिएर सुरुदेखि नै चुजी छु । चाहे त्यो तमिल, तेलुगू या हिन्दी नै किन नहोस् । दक्षिण भारतीय फिल्मले मलाई खराब हिन्दी फिल्मबाट बचाइरहेको छ । नत्र त एक समय आउँछ जब तपाईंलाइ लाग्छ कि तपाईं कुनै ठूलो फिल्ममा देखिनका लागि मात्र काम गर्नुहुन्छ । दक्षिण भारतीय फिल्मले मलाई यस्तो काम गर्न टाढा राख्छ’, उनले भनेका छन् ।
सोनु हालैमात्र तेलुगू फिल्म ‘आचार्य’मा देखिएका थिए । जहाँ उनले चिरञ्जीवी र उनका छोरा रामचरणसँग अभिनय गरेका थिए । यो फिल्ममा सोनुलाई नकारात्मक भूमिकामा देखाइएको थियो । यद्यपि, फिल्मले बक्सअफिसमा खासै कमाल देखाउन सकेन ।
उनले अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर र सञ्जय दत्तका साथ फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’मा पनि अभिनय गरेका छन् । यो फिल्म ३ ज’नमा रिलिज हुँदै छ ।
समान्था बनिन् भारतकै लोकप्रिय अभिनेत्री
कुन ठाउँमा के बोल्ने भन्ने याद गर्दैनन् दलका नेताहरु ? राष्ट्रिय
यसरी डुब्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा राष्ट्रिय
संकट अहिले दलहरुभित्र: राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आक्रामक रुपमा बढे ! राष्ट्रिय
कतार फिफा विश्वकप अर्जेन्टिनाले जित्ने सुवास नेम्बाङको विश्वास राष्ट्रिय